Abaphosela amaProteas balungisela ukulwa okunzima
Abaphosela amaStandard Bank Proteas balungele ukulwa kanzima ukukhipha ama-wicket angu-10 e-England ukuze banqobe umdlalo wesibili we-Test eeTrent Bridge. u-Alastair Cook (0) no-Keaton Jennings (0) basinde ama-overs amane ngaphambi kokuphela kosuku lwesithathu, futhi kuzomele basinde bebhekene nabahlasela ngebhola ‘abalambile’ futhi abagqugquzeke ukunqoba ngerekhodi lama-runs angu-474.
Ovulela amaProteas, uDean Elgar, uthi ibhola elisha lizobaluleka nge-session yokuqala ngoMsombuluko, kodwa ukholwa ukuthi wonke umuntu ophosayo kuzomele adlale indima ukulinganisa i-series.
“Kuzobanzima ukuthola ama-wicket angu-10,” ngeSonto emuva komdlalo wosuku. “Kusilungele thina, abasiphoselayo babheke lokho. Asifuni ukunqoba i-Test kalula, kumele kube umsebenzi onzima ukunqoba umdlalo we-Test. Silijabulele ikusasa.”
“Ngithanda ukuthi kuwona wonke umuntu (unendima okumele ayidlale) kodwa ibhola elisha likhulu kithina,” esho echaza. “Sibonile kuma-overs amafushane amane esibenawo kusihlwa ukuthi kuningi okusakhona kwi-wicket. Sinabaphosayo abangacikelela isimo kwi-wicket.”
“Kwi-innings yethu yokuqala iningi labadlali abaphosayo badlale indima. Kuyajabulisa ukubona, kuyakutshengisa ukuthi abafana balambile futhi bafuna ukudlala, ngebhola noma bge-bat, bafuna ukwenza umsebenzi.”
u-Hashim Amla (87) no-Elgar (80) baveze ukuqina ngenqondo obekudingeka kwisimo njengoba bahlanganise i-partnership ye-wicket yesibili enesibindi yama-runs angu-135, okubeke isikhonkwana sokuthi bathathe i-declaration ku-343/9. Uyavuma ukuthi isimo sesilula kancane uma ukhuluma ngokushaya, kodwa uthemba ukuthi i-variable bounce kanye nokucikelela phansi kwesimo kuzodlalela ezandleni zabo.
“Ngithemba ukuthi kungamanzima kakhulu kusasa,” u-Elgar ekhuluma ngesimo. “Bekunenselela, ikakhulukazi namhlanje ekuseni nesimo sezulu, ibhola linyakaza kancane futhi sibheke abaphosayo abasezingeni eliphezulu emhlabeni besebenzisa ukuphosa nge-swing. Sisebeze kakhulu, mina no-Hash (u-Amla), asikoranga ngokushesha osukwini kodwa unjalo umdlalo. Sekuhamba kancane futhi sithemba i-wicket ingacikeleleka phansi ihambelane nathi kusasa.”
AmaProteas abekela i-England umphumela omkhulu uMorris uphendula isicelo sakapteni Uthi uDu Plessis amaProteas ‘azovivinywa isimilo’ uMoeen Ali uthatha abayisithupha ukunqobisa i-England Die Standard Bank Proteas bly optimisties dat hulle steeds kan terugveg in die eerste Toets teen Engeland op Lord's. Engeland is stewig in die saal met 'n voorsprong van 216 met nege paaltjies staande na drie dae se spel. Azikho izizaba zama-no-balls - uPhilander uRoot ubungaza usuku lakhe lokuqala njengokapteni ngokuthola ikhulu ukubeka i-England ngaphambili uPhilander ubuyela kwinkundla eyamulethela ukujabula uElgar onesibindi indoda yomsebenzi – uDomingo uDu Plessis uzophuthelwa iTest yokuqala ngenxa yomndeni I-Series iqala kusasa - uElgar